ओलीका दुई अस्त्र : पहिलो रोजाई मध्यावधि, दोस्रो महन्थको उद्दार !
हाम्रोखबर आइतबार​, चैत्र २२ २०७७
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिबार बालुवाटारमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन चुनौति दिए । नेपाली कांग्रेसले उनको राजीनामा मागेको भोलीपल्टै ओलीले आफू राजीनामा दिन तयार रहेको तर त्यसभन्दा अघि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरिनुपर्ने अत्तो थापे ।
सरकारलाई माओवादी केन्द्रको समर्थन रहेको छ । माओवादीले समर्थन फिर्ता लिने वित्तिकै सरकार अल्पमतमा पर्छ । त्यसबेला उसले संसदमा बहुमत अर्थात विश्वासको मत देखाउन सक्नुपर्छ या नयाँ सरकार गठनका लागि बाटो खोल्नुपर्छ । त्यस्तो परिस्थिति निर्माण भए ओलीले के गर्लान त ? सबैको चासो यसैमा छ ।
नेकपा एमालेका एक नेता त्यो अवस्था आएमा केपीको पहिलो रोजाई मध्यावधि निर्वाचन कै हुनेछ । किनभने अहिले पनि उनले गत पुषमा गरेको असंवैधानिक संसद भङ्ग गर्ने निर्णय सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याए पनि त्यसको बचाउ गर्न छाडेका छैनन् । ओलीको उक्त कदमलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि साथ दिंदै आएकी छन् । ती नेता भन्छन्–‘जसरी पनि बल मिच्याईँ गरेर आफ्ना कुरा माथि पार्न माहिर ओलीको पहिलो रोजाई मध्यावधि चुनाब नै हो ।’
तर मध्यावधिको घोषणा ओलीका लागि त्यति सहज नरहेको एकथरी विश्लेषकको ठम्याइ छ । यद्यपी उनको पहिलो प्रयास भने मध्यावधि नै रहने ती नेताको दाबी छ ।
यदि मध्यावधि चुनावको प्रयास आफू अनुकुल नरहे ओली दोस्रो प्रयासमा लाग्नेछन् । जुन प्रयास भनेको माओवादी केन्द्रलाई कुनैपनि हालतमा सरकारमा पुग्न नदिनु हो । यसका लागि उनले नेपाली कांग्रेसको पहलमा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पाटी बिच हुने भनिएको सत्ता समीकरणलाई कुनै पनि हालतमा सफल हुन नदिनु । ती नेताका अनुसार, यसका लागि ओलीले जस्तो सुकै हत्कण्डा गर्न सक्छन् । यस्तो अवस्था आएका ओलीले जसपाका नेता महन्थ ठाकुरलाई प्रधानमन्त्री पद नै सुम्पन सक्छन् । ओलीले यस्तो कदम चाले त्यसलाई अनौठो नमाने हुन्छ भन्दै ती नेता भन्छन,‘ किनभने ओलीको स्वभाव नै जसरी हुन्छ आफूलाई मन नपरेकासँग बदला लिने रहेको छ ।’